Barnaamijyo - Madal Madal | Golaha Moobaylka (Bogga 2)
Top 12 NES Emulators ee Windows 10
Haddii aad rabto inaad xasuusato waqtiyo kale oo aad maalinta ku qaadan karto ciyaarista NES, waa kuwan emulators -ka ugu wanaagsan NES ee Windows 10
Sida loo qulqulo Twitch iyo waxaad u baahan tahay
Ku baahinta cayaarahaaga Twitch waa hab aad u fudud adoo raacaya talooyinka aan kugu tusinno maqaalkan.
Loom: dalabka moodada ah ee lagu duubo fiidiyowyo shaashad leh
Haddii aad rabto inaad duubto shaashadda kombiyuutarkaaga oo ay weheliso sawirkaaga mareegaha webka, dalabka Loom -ku waa ku habboon yahay laakiin maahan kan keliya.
Barnaamijyada Nadiifinta PC -ga ugu Fiican
Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa sida loo hagaajiyo waxqabadka kombiyuutarka barnaamijyada nadiifinta pc -ga ugu fiican. Geli oo hagaaji saddex tallaabo.
U beddelo M4B MP3: 5 Barnaamijyo Bilaash ah si Loo Helo
Raadinta barnaamij wanaagsan oo loogu beddelo faylasha M4B MP3? Waxaan ku tusaynaa 5 -ta doorasho ee ugu fiican si aad hawshan u qabato.
Horgalaha 212: waa kuma? Ogow haddii uu yahay taleefan sugan
Haddii aad ka hesho wicitaanno iyo farriimo lambarro leh horgale 212, halkan waxaan ku sharraxaynaa meesha ay ka yimaadeen, sababta ay u yihiin iyo sida loo xannibo.
Discord Nitro: waa maxay sideese loo helaa?
Ku sii wad qodobbada loogu talagalay barnaamijka 'Discord platform' ka dib markii aan ku tuso adiga 25-ka ugu fiican ee loogu talagalay Discord iyo ...
Sida loo cusboonaysiiyo Avast Free sannad kale
Haddii xubinnimadaada bilaashka ah ee Avast Free ay dhammaatay, halkan waxaan ku tuseynaa sida loo cusboonaysiiyo sannad kale si fudud oo dhaqso leh.
5ta barnaamij ee ugu fiican ee la waafajin karo maqalka iyo fiidiyaha
Waxaan soo bandhignaa isku -darka barnaamijyada iyo codsiyada ugu wanaagsan si loo waafajiyo maqalka iyo fiidiyaha kombiyuutarada iyo mobilada.
9-ka cayaaryahan ee ugu wanaagsan ee lagu dhejiyo muusikada Discord
Maqaalkan waxaan ku tusaynaa bots -ka muusikada bilaashka ah ee ugu fiican Discord
25-ka sare ee loo yaqaan 'Discord'
Thanks to bots badan oo loo heli karo Discord, waxaan abuuri karnaa kuna ilaalin karnaa bulshadeena qaab aad u fudud
5-ta barnaamij ee ugufiican ee qoraallada lagu soo koobo bilaash
Haddii, ama arday ahaan ama xirfad ahaan, aad la kulanto hawl culus oo ah soo koobidda qoraallada, agabyadan ayaa kaa caawin doona.
5-ta barnaamij ee ugufiican ee lagu qariyo IP-ga kumbuyuutarkeena
Isku-dubbarid qoraal ah oo aan ku taxnay 5-ta barnaamij iyo barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagu qariyo IP-ga kombuyuutarka.
Barnaamijyada ugufiican ee lagu abuuro muusig bilaash ah adoon xirfadle noqon
Haddii aad rabto inaad soo gasho adduunka muusikada, waa inaad ku bilowdaa codsiyo bilaash ah si aad u abuurto muusig sida kuwa aan halkan kugu tusno
Maxaad u arki weyday La 1 iyo La 2 telefishanka? Bal u fiirso xalkaan
Maxaan u arki waayey 1 iyo 2 TVgayga? Xaaladda waxay noqon kartaa mid aad u xanaaq badan, laakiin had iyo jeer, waxaa jira xalal.
WinDS PRO: waa maxay iyo sida loo rakibo emulator-kan
Tani waa sida WinDS PRO u shaqeyso, emulator-ka cajiibka ah ee noo ogolaanaya inaan ku ciyaarno ciyaar kasta oo Nintendo ah kombuyuutarkayaga.
5 bedel oo bilaash ah Lightroom ee Windows 10
Ma jiraa meel kale oo lagu raaxaysan karo faa'iidooyinka Lightroom oo bilaash ah? Jawaabtu waa haa. Waxaan ku falanqeyneynaa boostadan.
6da aqoonsi ee heesaha tooska ah ee bilaashka ah
Aqoonsiga muusikada lagu ciyaaro deegaankeenna waa nidaam aad u dhakhso badan oo fudud oo leh barnaamijyadan 6 ee loogu talagalay macruufka iyo Android
Sida loo uninstall barnaamij ku yaal Ubuntu
Ka-saarista barnaamijka Ubuntu, ama qaybinta kale ee Linux-ku-saleysan, waa geedi socod aad u dhakhso badan oo fudud adoo raacaya talaabooyinkan
ClearType ku qor Windows 10: waa maxay iyo sida loo kiciyo
Haddii aad rabto inaad ogaato waxa ClearType yahay iyo waxa loogu talagalay, qodobkaan waxaan ku xallineynaa dhammaan shakigaaga ku saabsan.
Sida loo arko erayga 'Netflix password' ee arjiga
Kama geli kartid Netflix barta biraawsarkaaga maxaa yeelay ma xusuusan kartid lambarkaaga sirta ah? Waxaan kuu sharraxeynaa sida loo arko lambarka sirta ee Netflix
Sida loogu soo dejisto Procreate bilaash mobilkaaga
Haddii aad jeceshahay sawirka ama naqshadeynta garaafka oo aad rabto inaad ku hesho Procreate lacag la’aan mobilkaaga, qodobkaan ayaa kaa caawin kara wax walba.
10-ka goobood ee ugufiican ee lagu dhagaysto muusikada bilaash
Haddii aad rabto inaad ogaato waa goobaha ugu wanaagsan ee lagu dhagaysto muusikada bilaashka ah, qodobkaan waxaan ku tusayaa 10ka ikhtiyaar ee ugu fiican.
Beddelka ugu fiican ee bilaashka ah ee Excel
Haddii baahiyahaagu aysan aad u sarreeyn markaad abuureyso waraaqo, waxaad u maleyneysaa inaad xiiseyneyso inaad ogaato 7-kan beddelka bilaashka ah ee Excel
Sida loo furo faylasha json
Haddii aad rabto inaad ogaato waxa faylasha json ay yihiin iyo sida aad ugu furi karto qalabkaaga, qodobkan waxaad ku qancin doontaa xiisahaaga
Sida loo furo faylka .bin
Iyadoo la adeegsanayo codsiyada saxda ah iyo aqoonta, ku furitaanka faylasha qaab BIN waa dabayl.
Faylasha MSG: maxay yihiin, sida loo furo loona abuuro
Faylasha .MSG waxay keydinayaan dhamaan waxyaabaha kujira emaylka, oo ay kujiraan wadada uu usocday emaylka ilaa ay gaarto sanduuqa boostada
Sida loo qaabeeyo eMule Windows 10 si loo soo dejiyo loona soo rogo feylasha
Baro sida loo qaabeeyo eMule-ka Windows 10 si fudud oo dhaqso leh si aad u soo dejiso oo aad u soo rogto faylasha si ka wanaagsan.
Sida loo soo dejiyo Qalabka Daemon bilaash
Marka ay timaado la shaqeynta CD-yada ama DVD-yada, iyadoo ku xiran nooca waxyaabaha ay ka kooban yihiin, kaliya ma sameyn karno ...
The 7 emulators ugu fiican Console for PC
Wax ka baro emulatarada ugu fiican ee kombiyuutarka ee kombuyuutarka boostadan soo uruurinta. Dhammaantood waa lacag la'aan waana mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna xasilloon.
5-ta beddelka Dropbox ee bilaashka ah
Haddii aad raadineyso waxyaabo kale oo DropBox ah, qodobkaan waxaan ku tusineynaa xulashooyinka ugu wanaagsan ee tilmaamaya faa iidooyinka iyo qasaarooyinka.
Top 3 Beddelka in VideoScribe
Ma jeclaan laheyd inaad ogaatid waxyaabaha kale ee lagu beddeli karo Videoescribe? Waxaan kuu keenaynaa saddexda beddel ee fiidiyoow-qorista ah ee ugu habboon marka la abuurayo fiidiyow.
5-ta barnaamij ee ugufiican ee sawirada loogu badalo sawiro
Miyaad jeceshahay inaad u rogto sawirkaaga sawir? Waxaan kuu soo qaadaneynaa liistada barnaamijyada ugu wanaagsan ee sawirrada loogu beddelayo sawirro.
Sida loo abuuro barnaamij bilaa barnaamij ah oo laga soo bilaabo xoq
Abuuritaanka barnaamij bilaa barnaamij ah, in kasta oo ay umuuqato mid caqli gal ah, waa macquul waana sidoo kale waa geedi socod aad u dhakhso badan oo fudud oo aan ku sharaxeyno qodobkaan.
Top 10 IPTV Apps ee kombuyuutarka
Haddii aad raadineyso codsiyada ugu fiican IPTV ee kombuyuutarka, qodobkaan waxaan ku tusaynaa 10-ka beddel ee ugu fiican suuqa.
Waa maxay Google Cassroom iyo sidee u shaqeysaa
Hadaad tan imaaday, waa sababta oo ah waxaad dooneysaa inaad ogaato waxa uu yahay Fasalka Google iyo sida barnaamijkaan Google u shaqeeyo ...
9-ka bedel ee ugu wanaagsan Gmail si loo maareeyo emaylka
Ma aha oo kaliya inaan ku noolaan karno Gmail maadaama aan gacanta ku hayno tiro badan oo beddelaadyo bilaash ah oo nooc walba leh isla markaana si siman u ansax ah.
Top 10 bilaash ah Kodi addons
Maqaalkan waxaad ka heli doontaa liiska 10-ka addon ee ugu wanaagsan ee Kodi si bilaash ah looga soo dejisto kombiyuutarkaaga.
5 barnaamij oo loogu diro faylal waaweyn bilaash
Sidee loo diraa faylal waaweyn? Tani maahan dhibaato aan la xallin karin. Adigu waxaad haysataa beddelka soo socda:
Sida loogu tirtiro sawirro nuqul barnaamijyadan bilaashka ah
Ma u baahan tahay inaad ka furto booska kombuyuutarkaaga ama mobilkaaga oo aadan aqoon sida? Waxaan kuu soo bandhigeynaa barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagu tirtiro sawirrada nuqul iyo wixii la mid ah.
Waa maxay feylka M3U maxaadse ku furan kartaa?
Ma haysaa feyl M3U ah oo aadan aqoon waxa uu yahay? Mashruucan waxaan kuugu sheegi doonaa dhammaan wixii ku saabsan faylasha M3U: waxa ay tahay iyo sida loo furo loona beddelo.
Waa maxay Skype sideese u shaqaysaa?
Si kastaba ha noqotee, waxaan ku baraynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Skype, wicitaanka fiidiyowga ugu caansan iyo barnaamijka shirarka abid.
Beddelka ugu fiican ee Lightroom
Waxaan rabnaa inaan kuu soo qaadano waxyaabaha ugu fiican ee lagu beddeli karo Lightroom ee aaladaha mobilada PC-ga iyo kuwa Android-ka ahba, waad beddeli kartaa sawirro aan xad lahayn.
Sida Loogu Sameeyo GIF-yada Asalka ah Ilbiriqsiyada
Haddii aan waligaa lagugu dhiirigelinin inaad abuurto GIFs, qodobkaan waxaan ku tusi doonaa sida ugu fudud uguna dhakhsaha badan ee loo abuuro iyaga.
Sida loo ciyaaro loona soo dejiyo barnaamijka 'Parcheesi STAR' PC-gaaga
Parchis STAR waa mid ka mid ah ciyaaraha ugu qosolka badan uguna isticmaalka badan halkaas. Waxaan ku bari doonaa sida loo ciyaaro loona soo dejiyo ciyaarta kumbuyuutarkaaga boostadan.
Waa maxay Zoom? Sida loo soo dejiyo loona isticmaalo si sax ah
Mahadsanid Zoom, barnaamijka masaafada dhib ma sii ahaan doono, waxaan kuu sheegi doonaa waxa loo yaqaan 'Zoom' iyo sida loo soo dejisto si sax ah loogu isticmaalo.
21 Khiyaamada Emailka Gmail ee Adiga Ka Yaabi Doonta
Haddii aad rabto inaad si buuxda u qaabeyso isticmaalkaaga Gmail, waxaan kugu martiqaadayaa inaad u fiirsato tabahaan loogu talagalay Gmail.
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee kumbuyuutarka lagu xakameeyo ee kombuyuutarka
Boostada soo socota waxaan ku tusi doonaa barnaamijyada kantaroolka fog ee bilaashka ah ee kombuyutarka iyo shaqooyinkooda ugu fiican.
Barnaamijyada ugufiican si looga saaro astaanta sawirrada iyo fiidiyowga
Ma rabtaa inaad astaanta astaamaha ka saarto sawirradaada ama fiidiyowyadaada oo aadan aqoon sida loo sameeyo? Qoraalkan waxaan ku tusaynaa barnaamijyada ugu fiican ee loogu talagalay.
BlueStacks 4 waa emulator-ka ugu fiican Android ee kombuyuutarka halkaas ku yaal. Waxaan ku tusineynaa sida loo soo dejisto oo loo falanqeeyo haddii ay amaan tahay oo sharci tahay.
9-ka tifaftireyaasha fiidiyowga ee bilaashka ah iyo kuwa calaamadeysan
Qoraalka soo socda waxaad ka heli doontaa tifaftireyaasha fiidiyowga ee bilaashka ah ee bilaashka ah. Diyaar ma u tahay inaad bilowdo tafatirka?
Sida loo furo loona furo faylasha 7z
Ma haysataa fayl ku jira 7z mana garanaysid sida loo furo? Waxaan ku tusineynaa barnaamijyada bilaashka ah ee ugu fiican si loo furo faylashaan.
Sida loo abuuro fayl ZIP ah oo la cadaadiyey si fudud
Faylasha ZIP-ka ayaa noo oggolaanaya inaan isku-riixno feylal badan iyada oo aan lumin tayada oo naga caawinaysa inaan bannaano boos. Waxaan kuu sharaxeynaa sida loo sameeyo ZIP
Sida loo Download Amazon Prime Video ee Windows PC
Ku raaxayso Amazon Prime Video ee kombuyutarka Windows adigoo soo dejinaya codsigan, bilaash ah oo aad u fudud. Waxaan kuu sheegeynaa sida loo soo dejiyo.
Abuureyaasha ugu fiican bilaashka iyo khadka tooska ah
Haddii aan dooneyno inaan abuurno haradayada ama astaantayada gebi ahaanba bilaash, sii wad aqrinta maxaa yeelay waxaan kugula talineynaa kuwa ugu fiican ee bilaashka ah iyo kuwa sameeya astaanta internetka.
Sida loogala soo baxo sawiradaada Google Photos iyo kuwa kale
Ka degsashada sawirrada Sawirada Google waa geedi socod aad u fudud adoo raacaya tillaabooyinka aan kugu tusinno qodobkan.
Sida loo raadiyo sawirro la mid ah ama la mid ah internetka
Waxaan ku bari doonnaa waxa loo yaqaan "gadaal raadinta" ama ka raadi sawirro la mid ah ama la mid ah internetka.
U turjun PDF khadka tooska ah: aaladaha bilaashka ah ee ugu fiican ee kaa caawin doona
Haddii aad u baahan tahay inaad ku turjunto PDF luqad kale, waxaan ku tusaynaa aaladaha bilaashka ah ee ugu fiican ee sidaas lagu samayn karo.
Sida loo daawado DAZN bilaash ahaan sharci ahaan
Tirada adeegyada rukunka ee nalagu qasbay inaan bixino hadii aan rabno inaan ku raaxeysano noocyo badan oo ...
InShot ee kombiyuutarka: sida loogu soo dejisto bilaash kombuyuutarkaaga
Ma taqaanaa fiidiyowga iyo tifaftiraha ugu fiican ee kombuyuutarka? Soo ogow sida loogu rakibo InShot kombiyuutarkaaga habka ugu fudud.
Pluto TV: waa maxay iyo buugyaraha uu ku leeyahay Spain?
Pluto TV waa barmaamijka cusub ee socodka ee laga heli karo Spain. Waana bilaash oo diiwaangelin la’aan! Waa tan waxa laga daawan karo TV-ga Pluto.
Sida loogu soo dejisto Microsoft Office 365 bilaash qalab kasta
Haddii aad rabto inaad ogaato sida aad u soo dejisan karto una isticmaali karto Microsoft Office 365 bilaash, qodobkaan waxaan ku tusi doonaa xeelad aad ku sameyso.
Waa maxay WeTransfer? Sida loo isticmaalo iyo sida ay u shaqeyso
Xalka ugu isticmaalka badan adduunka ee la wadaaga faylasha waa WeTransfer, laakiin waa maxay sideese loo adeegsadaa?
Beddelka ugu fiican ee TeamViewer ee xidhiidhada fog
In kasta oo TeamViewer uu yahay codsiga ugu caansan ee samaynta isku xidhka meelaha fogfog, ma aha kan keliya ee maqaalkan waxaan ku tusi doonnaa dhowr beddelaad
5 Beddelka Bilaashka ah ee Photoshop loogu talagalay Tafatirka Sawirada
Waxaa jira nolol ka baxsan Photoshop oo qodobkaan waxaan ku tusaynaa beddelka ugu fiican ee bilaashka ah ee tifaftiraha sawir ee awoodda badan
Sida loogu arko mobilada kombiyuutarka barnaamijyadan bilaashka ah
Inaad awood u yeelatid inaad aragto oo aad maamusho shaashadda taleefanka casriga ah ee PC ama Mac waa nidaam aad u fudud oo barnaamijyadan ah.
Beddel mashiinka raadinta ee Microsoft Edge Chronium
Maqaalkan waxaan si faahfaahsan ugu sharxi doonaa sida loo beddelo Edge Chromium aaladda raadinta iyo beddelka ugu fiican.
The emulators PS3 ugu fiican ee PC
Ku raaxeysiga qaar ka mid ah ciyaaraha caadiga ah ee Sony u siidaysay PS3 waa mid aad u fudud oo raaxo leh emulators-kaan PC-ga.
Bangiyada dhawaqa ugu fiican ee bilaashka ah si aad u soo dejiso saamaynta dhawaaqa
Ma u baahan tahay inaad kala soo baxdo saamaynta dhawaaqa bilaash? Halkan waxaan ku tusaynaa maktabadaha ugu fiican ama bangiyada codka si aad u soo dejiso saamaynta dhawaaqa.
Sida loo isticmaalo RetroArch, emulator-ka multilatform ee kaa yaabin doona
Kuwo badan ayaa adeegsadayaashu ku raaxaysteen ciyaaro waqti dheer, markaan dhaho waqtiga, waxaan ula jeedaa 20 sano ka hor ...
Soo ogow barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagu sameeyo boodhadhka iyo boorarka kombuyuutarka
Maxay yihiin barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagu sameeyo boodhadh iyo boodhadh kombuyutarkayga ah? Halkan waxaan ku tusaynaa fursadaha ugu fiican.
Kombiyuutarkaagu ma kululaadaa? Ma taqaanaa sida loo cabiro heerkulka PC-gaaga? Halkan waxaan ku tusaynaa barnaamijyada ugu fiican ee lagu xaliyo.
Sida loogu duubo dhawaqa PC-gaaga bilaash barnaamijyadan
Ma u baahan tahay inaad duubto codka PC-gaaga oo ma taqaanid sida? Ma rabtaa inaad wax ka bedesho? Halkan waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo iyo barnaamijyada bilaashka ah ee ugu fiican.
Sida loo ogaado haddii WiFi-ga la xado: barnaamijyo iyo qalab bilaash ah
Waxaan ku tusineynaa sida loo ogaado in WiFi-gaaga laga xado guriga iyo sida looga fogaado. Khiyaamadahan fudud shabakaddaada WiFi ayaa noqon doonta tan ugu badbaado badan.
U badal CD Audio Audio MP3: barnaamijyada ugu fiican kombuyuutarka
Thanks to barnaamijyadan waxaan ka wareejin karnaa maktabadayada oo dhan CDS ilaa Mp3 si aan ugu ciyaarno muusigeenna qalab kasta.
Sidee loo abuuraa daruuraha ereyga khadka tooska ah iyo bilaashka ah?
Waa maxay erayga daruuro? Ma jiraan bogag internet oo bilaash ah oo iyaga lagu abuuro? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabahaan muuqaalka cajiibka ah.
6 antivirus khadka tooska ah oo bilaash ah oo sifiican u shaqeeya
Ku qor liistada antivirus-ka ugu fiican ee internetka si aad u falanqeyso faylasha kombuyuutarkaaga isla markiiba, gebi ahaanba bilaash.
Sida loogu midoobo laba PDF mid mid: qalab bilaash ah
Ku biirista laba ama in ka badan oo faylal ah oo qaab PDF ah ayaa ah hawl aad u dhakhso badan oo sahlan oo la socota codsiyada bilaashka ah ee aan kugu tusinno qodobkan.
Sida loogu isticmaalo mobiladaada kamarad ahaan barnaamijyadan
Barnaamijyadan waxaad awoodi doontaa inaad u adeegsato taleefankaaga casriga ah kamarad kamarad iyadoo aanad lacag ku maalgelinayn inaad iibsato mid u heellan.
The emulators PS2 ugu wanaagsan ee PC iyo Android
Isku duwidda emulators-ka ugu fiican PS2 inuu ku ciyaaro kombuyutarkaaga ama Android, gebi ahaanba bilaash ah oo ay la socdaan kontarooleyaal isku habboon